Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499361 times)
« Reply #280 on: June 07, 2011, 01:42:51 PM »
ကွန်ပျူတာရေထဲကျသွားတော့ စိတ်ညစ်သွားတဲ့ အင်ဂျင်နီယာဟာ ရုတ်တရက် ငယ်ငယ်တုန်းက သူအမြဲကြားခဲ့ရဖူးတဲ့ သစ်ခုတ်သမားနဲ့ ပုဆိန် ပုံပြင်ကို သတိရလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သူဟာ မြစ်စောင့်နတ်သမီးကို တိုင်တည်ပြီး ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီခါ မြစ်စောင့်နတ်သမီးက ကိုယ်ထင်ပြလာပြီး “ဘာအတွက် သူ့ကိုတိုင်တည်ပါသလဲ” လို့မေးတော့ အင်ဂျင်နီယာက သူ့ကွန်ပျူတာ ရေထဲကျသွားကြောင်း နတ်သမီးကို ပြောပြပါတယ်။ပုံပြင်ထဲက အတိုင်းပါဘဲ။ နတ်သမီးက အင်ဂျင်နီယာရဲ့ ရိုးသားမှုကို စမ်းချင်တော့ မီးခြစ်ဆံဗူးကလေးကို မြစ်ထဲက ယူလာပြီး “ဒါဟာ ရေထဲကျသွားတဲ့ ကွန်ပျူတာလား”လို့ အင်ဂျင်နီယာကို ပြပါတယ်။ ဒီတော့ အင်ဂျင်နီယာကလည်း ကွန်ပျူတာကိုတောင် မသိတဲ့ နတ်သမီးရဲ့ ခေတ်ရဲ့ ဗဟုသုတ နည်းပုံကို စိတ်ပျက်သွားပြီး သူ့ကွန်ပျူတာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
« Reply #281 on: June 07, 2011, 02:03:52 PM »
အမြန်မောင်းတဲ့ ကားတစ်စင်းနောက် ရဲကားတစ်ကားလိုက်လာတယ်။ တစ်နေရာမှာ မီတော့ ရဲက ကားသမားကို
"ခင်ဗျာ ဘာလို့ ဒီလောက် အမြန်မောင်းရသလဲ? ဒဏ်ငွေ အများကြီးဆောင်ရမယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား?
ဒီငွေတွေနဲ့ တခြားအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား?"
"ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်. . အဲဒီငွေတွေနဲ့ ကျွန်တော်လိုင်စင်သွားဖြေလို့ရပါတယ်"
အဲဒီမှာ ကားသမားမိန်းမက စကားအမြန်ဖာတယ်။
"တောင်းပန်ပါတယ်... တောင်းပန်ပါတယ်.. ကျွန်မအမျိုးသားက အရက်မူးလာရင် စကားလျှောက်ပြောတတ်တယ်"
"ဘာ... လိုင်စင်လည်းမရှိဘူး... အရက်သောက်ပြီး ကားမောင်းတယ်"
အဲဒီမှာ နောက်ခန်းမှာထိုင်တဲ့ အဘွားအိုတစ်ဦးက
"အဲဒါကြောင့် အစကတည်းကပြောတာပေါ့... ခိုးလာတဲ့ကားကို အမြန်မမောင်းပါနဲ့လို့.........."
« Reply #282 on: June 07, 2011, 02:06:12 PM »
ဟိဟိ တွေးမကြည့်ရ ဆုံးအောင်ဖတ်ပါ..
ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုပြောတယ်... ကို.. သွင်းကြည့်မယ်နော်..
ကောင်လေး .... ဟောဝင်သွားပြီ...
ကောင်မလေး ... အင်း...
ကိုပေးတဲ့လက်စွပ်ကို တစ်သက်လုံး ၀တ်ထားရမယ်နော်..။
« Reply #283 on: June 07, 2011, 02:25:57 PM »
အာဒမ် နဲ့ ဧ၀
« Reply #284 on: June 07, 2011, 02:41:46 PM »
A ၊ ကျနော်.မှာ အရမ်းကိုလိမ္မာတဲ.သားတစ်ယောက်ရှိတယ်
B ၊ ခင်ဗျားသား ဆေးလိပ်သောက်လား
A ၊ မသောက်ဖူးဗျ
B ၊ ယမကာတွေရောသောက်တတ်လား
A ၊ နိုး
B ၊ ညဉ့်နက် သန်းခေါင်မှ အမြဲအိမ်ပြန်လာလေ့ရှိလား
A ၊ မရှိဖူးဗျ
B ၊ ခင်ဗျား ကံကောင်းတာပေါ.။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ခင်ဗျားမှာတကယ့်ကို
လိမ္မာတဲ့သားတစ်ယောက်ရှိနေပြီလို. ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ နေပါဦး၊ သူ.အသက်
A ၊ လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ.ဆို ဒီကောင့်အသက် ခြောက်လတင်းတင်းပြည့်ပြီ
« Reply #285 on: June 07, 2011, 03:02:01 PM »
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာတွင် အသက်ငယ်ရွယ်သော ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးရှိလေသည်၊ ထိုဦးဇင်းလေးသည် တရားပေးရာ၌ အလွန်ကောင်းမွန်လေသည်၊ အထူးသဖြင့် အသုဘတရားဟောကြားရာတွင် အားသန်ပြီး ဦးဇင်းလေးဟောကြားသော အသုဘတရား နာယူရသူများသည် ပူဆွေးသောကများ သက်သာရာရကြသဖြင့် ဦးဇင်းလေးအား အလွန်ပင် ကြည်ညိုသဒ္ဒါ ဖြစ်ကြလေသည်။
တစ်နေ့တွင် ဦးဇင်းလေး၏မိခင်ဖြစ်သူသည် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်လေသည်၊ ရွာမှ ဒကာ/ဒကာမများလည်း ဦးဇင်းလေး မိခင်၏ အသုဘသို့ သွားရောက်ကြလေရာ ဦးဇင်းလေးသည် ခေါင်းရင်းဘက်တွင် ထိုင်၍ တရှုံ့ ရှုံ့ ငိုကြွေးလျှက်ရှိလေသည်၊ ဒကာများလည်း အသုဘရှင်ဖြစ်သော ဦးဇင်းလေးဟောမည့် တရားအား နာယူမှတ်သားနိုင်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြလေသည်။
ထိုသို့ ဦးဇင်းလေး ငိုနေရာ အချိန် ကြာလာသေအခါ အသုဘလာရောက်သူ ဒကာတစ်ဦးမှ စိတ်မရှည်သဖြင့် `` အရှင်ဘုရား ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်ငိုနေရတာတုံးဘုရာ့၊ သူများတွေ ဆုံးတုံးကတော့ ဦးဇင်းတရားနာပြီး ဖြေသိမ့်နိုင်ကြသေးတာပဲ၊ ဦးဇင်းလဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တရားနဲ့ ဖြေပေါ့ ´´ ဟု ပြောလိုက်လေရာ ဦးဇင်းလေးသည် ငိုထားသောမျက်လုံးနီနီကြီးများဖြင့် ဒကာအား စူးစိုက်ကြည့်ကာ ``ဟကောင်ရ ဒါက ငါ့အမေကိုးကွ ´´ ဟု ပြောလိုက်လေတော့သတည်း။
« Reply #286 on: June 07, 2011, 07:53:10 PM »
ဓာတုဗေဒဆရာမက အက်ဆစ်ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေကို ရှင်းပြနေတယ်။
သူဟာ အက်ဆစ်ထည့်ထားတဲ့ခွက်ကို ယူလိုက်ပြီး သူ့လက်က လက်စွပ်ကိုပါ ချွတ်လိုက်တယ်။
``အခု ဆရာမ လက်စွပ်ကို အက်ဆစ်ထဲ ထည့်လိုက်မယ်။ လက်စွပ်ဟာ အက်ဆစ်ထဲမှာ ပျော်ဝင်သွားမှာလား´´
``ဟုတ်တယ်… မင်းဘယ်လို သိသလဲကွယ့် ဘာတီ´´
``ပျော်ဝင်နိုင်မှဖြင့် လက်စွပ်ကို အက်ဆစ်ခွက်ထဲ ဆရာမ ဘယ်ထည့်လိမ့်မလဲ´´
« Reply #287 on: June 08, 2011, 11:11:25 AM »
မေမေက မိစုကို ဂီတပွဲခေါ်သွားတယ်။ ဂီတပွဲစင်မြင့်ပေါ်က တုတ်တံလေးကိုင်ပြီး
ဟိုရမ်းဒီရမ်းလုပ်နေတဲ့လူကို မိစုအရမ်း စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
အဆိုတော်ကိုကြည့်လိုက်နဲ့ မိစု ခေါင်းထဲ မေးခွန်းတချို့ဝင်လာတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့
ပွဲပြီးတော့ မေမေကို မိစုမေးတယ်။
"မေမေ... မေမေ... စင်မြင့်ပေါ်က ဟိုဦးဦးက တုတ်ကိုင်ပြီး ဘာဖြစ်လို့
"မခြောက်ပါဘူး သမီးရဲ့.. သမီး ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမေးရတာလဲ?"
"ဟိုဒေါ်ဒေါ် ငယ်သံပါအောင် အော်နေလို့လေ..."
« Reply #288 on: June 08, 2011, 11:13:23 AM »
ဂျပန်ငလျင်ကြောင့် နျူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖိုပေါက်ကွဲတော့ တရုတ်ပြည်နေရာအများမှာ
"ဆား"လုပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆားထဲပါတဲ့ အိုင်အိုဒင်းဓာတ်က နျူကလီးယားအန္တရာယ်ကို
တယ်။ ဆားလုပွဲအကြောင်းကို တရုတ်ပြည်သူတချို့က
လှောင်ပြောင်ရှုတ်ချပြီး အခုလို အင်တာနက်ပေါ်မှာ "ဆား"အကြောင်းတွေကို ဟာသလို၊
ပုံပြင်လို၊ သံချပ်လိုအမျိုးမျိုးနဲ့ ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီထဲက
လောကမှာ နာကျင်တာက ဘာလဲ?
နျူကလီးယား မလာသေးဘူး။ ဆားကုန်သွားတာဖြစ်တယ်။
လောကမှာ အနာကျင်ဆုံးက ဘာလဲ?
နျူကလီးယား လာပြီ ဆား အသုံးမဝင်တော့တာဖြစ်တယ်။
လောကမှာ အနာ့အနာကျင်ဆုံးက ဘာလဲ?
ပိုက်ဆံတွေအားလုံး ဆားဝယ်လိုက်ပြီး ဆန်ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံမရှိတာဖြစ်တယ်။
လောကမှာ အနာ့အနာ့အနာကျင်ဆုံးက ဘာလဲ?
ဆားစားလို့ လူကငန်သေသွားပြီ ဆားက သုံးလို့မကုန်သေးတာဖြစ်တယ်။
မ....... ဒါနဲ့များ ကျွန်မကို ချစ်ချင်သေးတယ်....
ကျား... ကျွန်တော့်မှာ ဆားရှိတယ်။
မ...... အိုး! ချစ်စေ..
အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်တွေက တရုတ်တွေ ဆားလုတာကိုတွေ့လို့ ရယ်လိုက်တာအူတက်ပြီး
ဂျပန်ငလျင်ပြီးနောက် လူ၃ယောက်သေပြီး နတ်ပြည်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီလူတွေက ဂျပန်၊
ကိုးရီးယားနဲ့ တရုတ်တို့ဖြစ်တယ်။ သူတို့၃ယောက်ကို နတ်မင်းကြီးက မေးတယ်။
ဂျပန် "ဆူနာမီကြောင့် သေတာပါ"
ကိုးရီးယား "နျူကလီးယားဓာတ်ငွေ့ကြောင့် သေတာပါ"
တရုတ် "ဆားစားလို့ ငန်ပြီးသေတာပါ"
Forward Mail မှ ရတာလေးပါ။
« Reply #289 on: June 08, 2011, 12:30:09 PM »
သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဆုံကြတဲ့ အချိန်မှာ ပထမ သူငယ်ချင်းက “အခုခေတ် မိန်းကလေး တွေက အသက် အရွယ်ကို ခန့်မှန်းရ တော်တော် ခက်တယ်ကွ”လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ အခါမှာ ဒုတိယ သူငယ်ချင်းက“ဒါများကွာ အလွယ်လေးပါ။ သူတို့ကို ချီးမွမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်အရွယ်လဲ ဆိုတာ ခွဲခြားလို့ ရတယ်။ နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင် မိန်းကလေးသာ ဆိုရင် သေချာတာက ရှက်သွေးဖြာ သွားမယ်။ သုံးဆယ် ၀န်းကျင်ဆိုရင်တော့ မင်းက မဆိုးဘူးလို့ မှတ်ချက်ချမယ်။ အဲ လေးဆယ်ဝန်းကျင် မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်နေရင်တော့ မင်းသူ့ဆီက ဘာများ လိုချင်နေတာပါလိမ့်လို့ သံသယ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်လိမ့်မယ်”လို့ အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝတဲ့ သူတစ်ယောက်လို ရှင်းပြပါတယ်။
ကောင်လေးက သူမြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်နေမိတဲ့ မမရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို စူးစိုက်ကြည့်ရင်း “မမရယ် ကျွန်တော့် နှလုံးသားတွေ တစ်စစီကြွေ ကုန်ပါပြီ။ အဲဒီလိုဖြစ်အောင် မမ လုပ်ရက်တယ်ဗျာ။ ဘာလို့လဲ ဆိုရင် မနေ့က မမကို တခြား ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော် တွေ့လိုက်ရတယ်လေ”လို့ ကြေကွဲ ဆို့နင့်စွာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ မမက ကောင်လေးအထင် မလွဲအောင် ကပျာကယာ ဖြေရှင်းလိုက်ပုံက “အိုကွယ် ကလေးရယ်။ မင်းအထင် လွဲနေတာပါ။ အဲဒီလူက မမခင်ပွန်းကွဲ့။ မမအတွက် မင်းမဟုတ်တဲ့ တခြားတစ်ယောက် ဆိုတာ လုံးဝ မရှိပါဘူးကွယ်”တဲ့။